/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်ေတာ်နှင့် ဆရာ KEY
ကျွန်ေတာ်နှင့် ဆရာ KEY
ထိုေန့က ကျွန်ေတာ် ဗို်လ်ချုပ်ကျွန်းမှ ထွက်လာခဲ့ြပီး ေရွှတိဂံုဘုရားသို့တက်ရန် ဘယ်ဘက်သို့ ဦးတည်လိုက်သည်။ ထိုအချိန် ကျွန်ေတာ့်အနားသို့ Super Roof ကားနက်ေလးတစ်စီး ထိုးရပ်လာြပီး " ဗျို့ အစ်ကိုေရ ဘယ်သွားမလို့တုန်း...၊ လမ်းြကံုရင် လိုက်ခဲ့ေလဗျာ.." ၊ အသံြကားကာမှ ေသချာြကည့်မိေတာ့ ကား၀ပ်ေရှာ့လုပ်ကိုင်ေနေသာ အသိတစ်ေယာက် ြဖစ်ေနသည်။ ကျွန်ေတာ်လည်း လမ်းြကံုတာနှင့် ကားေပါ်သို့ တက်လိုက် မိေတာ့သည်။
ကားေပါ်ေရာက်မှ ေသချာြကည့်မိေတာ့ သူတစ်ေယာက်တည်းမဟုတ်။ အသက်(၄၀)ေကျာ်အရွယ် ကုလားလူမျိုး တစ်ေယာက် ရိှေနသည်ကို သတိထားမိလိုက်သည်။ "အစ်ကိုေရ.. အိမ်ကို လိုက်ခဲ့ပါဦးလား... ကျွန်ေတာ်အခု အိမ်က မီးခံေသတ္တာြပင်ဖို့ ေသာ့ြပင်ဆရာကို သွားေခါ်လာတာဗျ " ဟု မိတ်ေဆွက ဖိတ်ေခါ်ေလသည်။ ြကည့်လိုက်ေတာ့ မီးပွုင့်ေရာက်ေနြပီ ။ ေရှ့ဆိုရင် ေရွှတိဂံုဘုရားသို့ ေရာက်ေတာ့မည်။ ကျွန်ေတာ်လည်း အားေနသည်နှင့် အိမ်အလည်လိုက်ရန် ဆံုးြဖတ်လိုက်သည်။ သို့နှင့် ကျွန်ေတာ်တို့ ရန်ကင်းသို့ ဦးတည်လာခဲ့ေလေတာ့သည်။
"ဒီကအစ်ကိုက ေသာ့စ်ြပင်ဆရာလား" ဟု ကျွန်ေတာ်မှပင် တိတ်ဆိတ်မှုကို ြဖိုခွင်းလိုက်၏။ ြကည့်လိုက်ေတာ့ ေရွှဂံုတိုင်မီးပွိုင့် မိေန၏။ "ဟုတ်ပါတယ် " ဟု ြပံုးြပကာ ြပန်ေြပာသည်။ "လုပ်စားတာ ြကာြပီလား အစ်ကို" ဟု ထပ်ေမးလိုက်သည်။ "ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်ေတာ် ဒါနဲ့ ထမင်းစားလာရတာ၊ လုပ်သက် (၂၃)နှစ်ရိှပါြပီ၊ ကျွန်ေတာ့် အေဖကလည်း ဒီေသာ့ြပင်တာေလးနဲ့ပဲ လုပ်စားခဲ့တာ၊ ကျွန်ေတာ်တို့ မိသားစုကို ရှာေကျွးခဲ့တာေပါ့" ဟု ြပန်ေြဖေလသည်။ "ေဩာ်"ဟု ေရရွတ်ကာ အတတ်ပညာတစ်ခုနှင့် ဘ၀၀မ်းကို ေကျာင်းေနသူပါလားဟု စိတ်ထဲ ေတွးလိုက်သည်။
သို့နှင့် ကျွန်ေတာ်သည် သူ၏ ဇာတ်ေြကာင်းအစံုကို ေမးြမန်းမိေလေတာ့သည်။ တစ်ေန့ ေသာ့ြပင်ဆရာခင်မျာ ေဈးဦးေပါက်အြဖစ် ၆ လမ်းမှ အိမ်တစ်အိမ်သို့ ေသာ့စ်သွားြပင်ရေလသည်။ သူ ေသာ့ြပင်ြပီး ေနာက်ေန့တွင် ထိုအိမ်အခိုးခံရေလသည်။ သိန်း(၄၅)သိန်းဖိုးေလာက် ပါသွားသည်။ ရဲမှ လူစိမ်းဘယ်သူ အ၀င်အထွက်ရိှခဲ့လဲဟု အိမ်ရှင်ကိုေမးရာ ေသာ့ြပင်တဲ့သူတစ်ေယာက်ရိှပါသည်ဟု ေြဖ၍ ထိုေသာ့ြပင်ဆရာအား ဘာမှ ေြဖရှင်းချက်မေပးနှင့်၊ သံတံခါးေနာက်သို့ ထည့်ထားလိုက်ေတာ့သည်။ တစ်ပတ်ြကာမှ ထိုသူခိုးအား မိေလေတာ့သည်။ ထိုအခါမှ ေသာ့ြပင်ဆရာ အြပင်သို့ ထွက်ရသည်။ အလုပ်လဲပျက် ၊ လူလဲဒုက္ခေရာက်ခဲ့ရေလသည်။ ဤကဲ့သို့လည်း ေထာင်ထဲသို့ ေသာ့ြပင်ဆရာ ၀င်ခဲ့ဖူးသည်။
လူငယ်တစ်ေယာက်ကလည်း ေသာ့တု လာလုပ်၏။ အပိုလုပ်ရန်ဟု ဆိုကာ ကိုယ့်အိမ်တွင်းမှ ပိုက်ဆံကို ခိုးယူတဲ့သူပင် ြဖစ်ေလသည်။ ထုိကဲ့သို့လည်း လူမိုက်အားေပးရာ ေရာက်ခဲ့ဖူးသည်။
တစ်ခါတစ်ေလ ေဈးဦး မေပါက်ေသာ ရက်များကလည်း ရိှေသး၏။ ေသာ့ြပင်ဆရာ၏ ဘ၀ကား မလွယ်ပါတကား ။ ဒီအပိုင်မှာ အိမ်ေဖာက်ထွင်းမှုြဖစ်လှျင် ဦးဆံုး သူတို့လို လူမျိုးများကို ေခါ်ယူထိန်းသိမ်း ြကသည်။ ေမးြမန်းစံုစမ်းြကသည်။ ဤသို့ ရာဇ၀တ်မှုေရးရာတွင်လည်း ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ေမးြမန်း စစ်ေဆးခံရသည်။
တစ်ခါကလည်း သူက အာမခံေသာ့လုပ်ေပးခဲ့သည်။ သို့ေသာ် သိပ်မြကာ ထိုအိမ်လည်း အေဖာက်ခံရသည်။ ေန့ခင်းြကီးကုိ ေဖာက်ြကြခင်းြဖစ်သည်။ ေသာ့စ်တစ်ခုလံုးကို ရစရာမရိှေအာင် ထုနှက်ရိုက်ြပီးမှ ဖွင့်သွားြခင်းပင်၊ ေဘးတွင်လည်း အခန်းများရိှြကသည်။ သို့ေသာ် ဘယ်သူမှ ဒီေလာက်ထုနှက်ရိုက်သွားသည်ကို မြကားသည်ကို အံ့ဩမိသည်။ ထိုတစ်ခါတွင်လည်း သူ့အား ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ သူခိုးအားမိေတာ့မှ ေသာ့ြပင်ဆရာအား ြပန်လွှတ်ေပးသည်။ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် ထမင်းရှာစားေနရေပသည်။ ခိုးသည့်သူခိုးကလည်း သက်သက်မဲ့ လမ်းလွဲေအာင် ပံုမှားရိုက်ြခင်းလည်း ြဖစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါလား ။
ရန်ကုန်ြမို့တွင် မီးခံေသတ္တာဆိုင်အချို့သည် နိုင်ငံြခားမှ သွင်းသလိုလိုနှင့် ဒီမှာပဲ အင်ထုကာ မီးခံေသတ္တာလုပ်ြကသည်ကို ထိုေသာ့စ်ြပင်ဆရာမှ ရှင်းြပေလသည်။ တကယ်တမ်းမီးေလာင်လှျင် လံုး၀ မခံေြကာင်း၊ ေလာင်မှာပင်ြဖစ်ေြကာင်း၊ အရင်တုန်းက သံုးြကတဲ့ မီးခံေသတ္တာေတွမှာ တကယ်ေကာင်းြကေြကာင်း၊ (၂၄)နာရီ မီးေလာင်ခံများပင် ရိှြကေြကာင်း၊ အခုေတာ့ ြမန်မာြပည်လုပ် အတုများ များြပားပါေြကာင်း သိရသည်။
ြကည့်လိုက်ေတာ့ ရန်ကင်း မိတ်ေဆွအိမ်သို့ပင် ကားက ချိုးေကွ့၀င်ေနေပြပီ။ သုိ့နှင့် ကျွန်ေတာ်တို့သံုးေယာက် မီးခံေသတ္တာအား ြကည့်ြက၏။ ေသာ့မှာ ေပျာက်သွားြခင်းပင်ြဖစ်၏။ နံပါတ်သာ မှတ်မိပါသည်။ ေသာ့ြပင်ဆရာကား နံပါတ်ေမးသည်။ နံပါတ်သိရေသာအခါ သူ့ခင်ဗျာ နံပါတ်အတိုင်း လှည့်ကာ သူ၏ သံေချာင်း အမှျင်တန်းေလးနဲ့ ေသာ့ေပါက်ထဲထိုးထည့်ကာ စမ်းေနေလသည်။ (၅)မိနစ်ေလာက် စမ်းြပီးေသာအခါ " ေချာက်"ဆိုြပီး တံခါးကို မယူလို့ ရသွား၏။ သူက လမ်းေြကာင်းေတွ လိုက်ေြပာင်းလိုက်၏။ အဘယ်ေြကာင့်ဆိုေသာ် အရင်ေသာ့ကို ြပန်ေတွ့ပါက မီးခံေသတ္တာကို ဖွင့်လို့မရေအာင် လုပ်ထားြခင်းပင်။
ဧည့််ခန်းတွင် ထုိင်ြကရင်း စကားေြပာြဖစ်ြကသည်။ မီးခံေသတ္တာတစ်ခုတွင် ေသာ့ပဲ ေပျာက်ပါက ထုိသို့ ြပုလုပ်ရသည်။ သုိ့ေသာ် ေသာ့ေပျာက်ကာ၊ နံပါတ်ပါ မမှတ်မိေတာ့ပါက ေသာ့နှင့် မီးခံေသတ္တာြကားတွင် သံေချာင်းတစ်ေပါက်စာ အေပါက်ကေလး ေဖာက်ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ေဖာက်ရင်း နံပါတ်ကို လိုက်လှည့်ရ၏။ ေဖာက်လိုက် နံပါတ်ကို လိုက်လှည့်လိုက်၊ နံပါတ်လံုး၀ လှည့်လို့မရေတာ့ဘူး၊ တင်းသွားြပီဆုိလှျင် ပွင့်ပါြပီ ။ အမှန်ေတာ့ ေသာ့နှင့် နံပါတ်အြကား ေြကာကို ြဖတ်လိုက်ြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ သံေချာင်းေလးနှင့် လိုက်စမ်းသည် ဆိုသည်ကလည်း ပညာတစ်ခုပင်မဟုတ်ပါလား။ ဒါကလည်း အေတွ့အြကံု လုပ်သက်နှင့် ဆိုင်ေပသည်။ "ေဖာက်ထွင်းတဲ့ သူခိုးေတွက ေတာ်ြကပါတယ်၊ သို့ေသာ် ကျွန်ေတာ် လှျို့၀ှက်တစ်ခုေြပာြပမယ်ဗျ၊ ဘယ်ေသာ့ြပင်ဆရာမှ အိမ်ရှင်ေတွေရှ့မှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ြပီးေအာင် မလုပ်ြကဘူး၊ ဒံုးဒံုး ဒိုင်းဒိုင်း ရိုက်ြပီး လုပ်ြပြကတယ်၊ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ သူခိုးေတွလိုပဲ လုပ်တတ်တယ်လို့ ထင်ြကမှာကိုး " ဟု ေြပာေလသည်။ ဒါလည်း သူတို့ဘက်က ကာကွယ်မှု တစ်ခုပင် မဟုတ်ပါလား ။
သို့နှင့် ကျွန်ေတာ်လည်း သိသင့်သေလာက် သိြပီးသည် ြဖစ်ေသာ်လည်း အားမရေသး။ ထုိ နံပါတ်မသိဘဲ စမ်းြပီးဖွင့်သည့် ေယဘူယျအသံုးချနည်းကို သိချင်၏။ ထုိ့ေြကာင့် မရရေအာင် နိှုက်ယူ ေမးရေလသည်။ ကျွန်ေတာ်မိတ်ေဆွခင်ဗျာ ေသာ့ြပင်ဆရာကို ထိုေလာက်ေမးေန၍ အားနာေနေသးသည်။
**အာမခံေသာ့စ်ဖွင့်နည်း **(ထိုဆရာ Key ေြပာြပခဲ့ေသာ ဖွင့်နည်းသာလှျင် ြဖစ်သည်)
အာမခံ ေသတ္တာကိုဖွင့်ရန် နံပါတ်(၄)ခုပါေသာ အတွဲြဖင့် ဖွင့်ရမည်။ ေအာက်ပါအတိုင်းဖွင့်ရပါမည်။
ဒိုင်ခွက်ကို ညာဘက်သို့လှည့်၍ နံပါတ်(30)ေရာက်လှျင် ရပ်ရန် ၊အလယ်အမှတ်နှင့် အညီထား၍ (၄)ြကိမ်လုပ်ရန် ။
ဒိုင်ခွက်ကို ဘယ်ဘက်သို့လှည့်၍ နံပါတ် (83) ေရာက်လှျင် ရပ်ရန်၊ အလယ်အမှတ်နှင့်အညီထား၍ (၃)ြကိမ်လုပ်ရန် ။
ဒိုင်ခွက်ကို ညာဘက်သို့လှည့်၍ နံပါတ်(48)ေရာက်လှျင်ရပ်ရန်၊အလယ်အမှတ်နှင့်အညီထား၍ (၂)ြကိမ်လုပ်ရန် ။
ဒိုင်ခွက်ကို ဘယ်ဘက်ကို့လှည့်၍ နံပါတ် (88)ေရာက်လှျင်ရပ်ရန်၊ အလယ်အမှတ်နှင့်အညီထား၍ (၁)ြကိမ်လုပ်ရန် ။
စလင်ဒါေသာ့ဂေလာက်ထဲသို့ ေသာ့သွင်း၍ ညာဘက်သို့လှည့်ြပီးဖွင့်ရန်။
မှားဖွင့်မိပါက အစမှ ြပန်လုပ်ရန် ။
ေသာ့ြပင်ဆရာနှင့် ဇာတ်လမ်းကား ဤတွင် ြပီး၏ ။ ကျွန်ေတာ့် ဘ၀တွင် အမှတ်မထင်ေတွ့ဆံုခဲ့ေသာ၊ ဗဟုသုတရခဲ့ေသာ အေြကာင်းေလးပင် ြဖစ်သည်။ ဆရာKey သာ ကျွန်ေတာ် ဤသို့ ေဖာက်သည် ြပန်ချမှန်း သိလို့ကေတာ့လား........................။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Thursday, December 18, 2008
သူခိုးနဲ့ ေသာ့ြပင်ဆရာ ဘယ်သူက ပညာပိုေတာ်မလဲမသိဘူးေနာ်
December 19, 2008 at 10:14:00 AM GMT+6:30
Key ဆရာေတွက ေတာ်ေတာ်ေလးကို ေတာ်ြကတယ်ေနာ်
December 19, 2008 at 10:52:00 AM GMT+6:30
December 19, 2008 at 10:55:00 AM GMT+6:30
အခုလို ေသာ့ြပင်ဆရာ တစ်ေယာက်ရဲ့အေြကာင်းကို သိလိုက်ရေတာ့ စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိပါတယ်။ ဘ၀အေြကာင်း တေစ့တေစာင်းေပါ့ေနာ်.....
December 19, 2008 at 10:58:00 AM GMT+6:30
အား ေတာ်ေတာ် ဗဟုသုတ ရသွားတယ်..
ေမးတာ ြမန်းတာ စိတ်၀င်စားတာ ဂျာနယ်လစ်ဉာဉ်လားဗျိုး..
December 19, 2008 at 4:32:00 PM GMT+6:30
December 19, 2008 at 4:47:00 PM GMT+6:30
December 19, 2008 at 7:03:00 PM GMT+6:30
ဘယ့်နှယ်.. ေသာ့ကို ထုနှက်ြပီး ဖွင့်သွားပါတယ် ဆိုမှ ေသာ့ြပင်ဆရာကို ေခါ်ထိန်းသိမ်းရတယ်လို့ . . .
ပံုမပျက် ဖွင့်သွားတာမို့ဆို ထားပါေတာ့ . ..
အင်း .. လမ်းလွှဲတယ်လို့ စဉ်းစားမယ်ဆိုလည်း တစ်မျိုးေပါ့ေလ..
ဘယ်ေလာက်လံုတယ် ဆိုဆို မလံုတာက မလံုဘူးပဲေပါ့ေနာ်..။
December 19, 2008 at 9:20:00 PM GMT+6:30
December 20, 2008 at 9:03:00 AM GMT+6:30
ဖတ်ေနတာ ေနာက်ဆံုးတစ်ေြကာင်းေရာက်မှ ြပံုးမိသွားတယ်။ ဆရာကီးသာ အွန်လိုင်းတက်လာရင် ကိုလင်းဦးကို တင်းေတာ့မှာပဲ။
December 22, 2008 at 1:25:00 AM GMT+6:30
December 22, 2008 at 3:08:00 AM GMT+6:30
တစ္ခ်ိန္က ဖတ္ဘူးခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတရ ေဆာင္းပါေလးတစ္ပုဒ္ေပါ့ ေမာင္လင္းဦးေရ...
အခုခ်ိန္မွာ ကြန္မန္႔တစ္ေၾကာင္းကို ရဲရဲတင္းတင္းေပးႏိုင္ၿပီမို႔ ေက်နပ္မိတယ္။
April 8, 2014 at 9:21:00 AM GMT+6:30